I-FFP2 / FFP3 KN95 Ifektri yeMask | KwiChina Abavelisi beMask FFP2 / FFP3 KN95, abaXhasi
FFP2 / FFP3 KN95 Isigqumathelo
Ukugoba ubuso kobuso
Indebe yobuso beMask
Ebunzini infraRed Thermometer
Umbala emininzi 3 Layer Sur ...
Banokubulawa Kids Face iimaski ...
Intengiso eshushu yodidi-3 maleko ...
Ukhuseleko loPhicotho-zincwadi 3 ...
Ilaphu eluhlaza lengubo ...
I-FFP3 iMask ekhuselweyo yokukhusela kunye neValve Q7, engeyiyo eyonyango
I-Ffp3 Imaski i-En149 kunye ne-Ffp3 Mask ene-Filter ine-design-fit design, isiqwenga sempumlo esiguqukayo, kunye ne-loops ye-ear ear that is comfortable on your ears. Imaski nganye ikwavavanyiwe kwaye yangqinwa ukuba ibhloka ngaphezulu kweepesenti ezingama-95 zamasuntswana, ngokophawu lwentengiso- ikwaphawula ukuba iimaski kufanelekile ukuba zilingane kakuhle kubume bobuso nobukhulu, ukuba nje kukho umgama wee-intshi ezintathu ukusuka phakathi kwempumlo kuye esilevini.
I-KN95 yoBuso beMaski-5 yoLuhlu olunokuPhefumla Uthuli lweMask Ukuthuthuzela okuKhuselekileyo okuSempilweni kwe-Elastic Ear Loops, Ukusebenza kokucoca
Ezilahlwayo KN95 Vuvu kunye KN95 imaski esebenza, ezenziwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu, ekhuselekileyo, ethambileyo, kwaye bekhululekile. I-KN95 yethu ayiyonyango, ayenziwanga imaski esemgangathweni, ikhuthazwa ukuba isetyenziselwe ukusetyenziswa ngumzi-mveliso yonke imihla. Isigqumathelo sinenqanaba lama-98% lokucoca ulwelo kwaye sikhusela intsholongwane. Uluhlu lwe-5-inqanaba lokucoca ulwelo lokuzibulala ngaphakathi. Ukuthintela ngokufanelekileyo amasuntswana afana nenkungu, uthuli kunye nomungu. I-earloops elula kunye nehlengahlengiswayo ukuze ifaneleke ngokufanelekileyo.
I-KN95 Face Mask 5-maleko oMnyama oMoya ophefumlayo kunye noKhuseleko lweMaski eyiNtsebenzo≥95%, iMaski yoKhuseleko yeNdebe yokulwa ne-PM2.5 -Kusongelwe umntu ngamnye (iMask emnyama)
Imigangatho emi-5 yemaski ye-kn95 kunye neMask enokuphinda isebenze ye-Kn 95 lukhetho olufanelekileyo ekusebenziseni kwakho kwemihla ngemihla, ungayisebenzisa esikolweni, eofisini, kwezothutho lukawonkewonke, kwizitalato zedolophu, kwiindawo ezinkulu. Gcina kude nothuli, PM 2.5, inkungu, umsi, umatshini wemoto, njalo njalo. Kwaye ii-kn95 zokukhusela iimaski zempumlo ezinokugoba zigxunyekwe kwimaski ukuthintela naziphi na amasuntswana avela ngaphandle. Ifanelekile phantse nakuphi na ekhaya, emsebenzini okanye kukhuseleko lokuhamba.
I-5-Layer Breathable Cup Dust Mask with Loastic Elastic Ear Loops, Filter Efficiency≥95%
Indebe yobuso beemaski ezilahlwayo zesakhelo sobuso esenziwe ngezinto zeplastikhi ekumgangatho wokutya, ithambile, igudile kwaye intofontofo, ayinetyhefu kwaye ayinabungozi, ayicaphukisi kulusu, iyahlambeka iphinde isebenze kwakhona.
I-KN95 Ubuso beMask 5 Uyilo lweNdebe yeeMaski zoKhuseleko, iiMaski zoKhuseleko eziPhefumlayo ngokuchasene ne-PM2.5 Uthuli
Ingubo engalukwanga Melt-Blown yeLaphu yeNdebe yoBuso beMaski kunye nokuphefumla iiNdebe zeMaski yobuso zilungele ukhuseleko lwabantu abadala bemihla ngemihla. Xa isetyenziswe kakuhle imaski ibonelela nge- ≥ 95% yokusebenza kweefilitha kwaye ikhusela ngokufanelekileyo impilo yokuphefumla. Nika esi sipho sikhethekileyo kubantu bakho obathandayo. Kwaye yinyani ye-5-ply layers ekhuselayo (2 ilaphu elingalukwanga, 2 ilaphu elinyibilikisiweyo, ikotoni yomoya oshushu eyi-1).
5 iimaski zoKhuseleko lweNdebe yeNdebe eMhlophe, uKhuselo loPhefumlo loThuli loMaski wasebenzisa ngaphakathi okanye ngaphandle
Ezilahlwayo Ukuphefumla iNdebe yeMaski kunye noNgcoliseko loThuli lokuCoca iNdebe yeMaski yeyona nto isetyenziselwa usapho ukukhusela imihla ngemihla. Xa isetyenziswe kakuhle imaski ibonelela nge- ≥ 95% yokusebenza kweefilitha kwaye ikhusela ngokufanelekileyo impilo yokuphefumla. Nika esi sipho sikhethekileyo kubantu bakho obathandayo. Kwaye ulungelelwaniso lwendalo jikelele phantse kubo bonke abasebenzisi abanezintambo ezizinzileyo zendlebe ukuze zilunge kwaye zilunge; Ukukhuselwa ngokupheleleyo.
Indebe yezoNyango yoBuso beMaski 98% yeFiltration
I-Mask-Dimensional Cup ye-Dust Mask kunye ne-Valve Cup Face Mask yi-mask ekhuselekileyo yokukhusela ubuso obufumanekayo kumacandelo asebenzayo kunye nokusetyenziswa ngokubanzi. Kulula ukuyibeka uyisuse kwaye ibambe kakuhle ebusweni ngaphandle komngcipheko wokutyibilika okanye ukukhululeka; imaski ikhululekile ukunxiba ngaphandle kokubangela nakuphi na ukucaphuka kulowo uyinxibileyo.
Ukwaleka kweNdebe yeNdebe ezi-5 eziphefumlelweyo ezinokuPhefumlwa iimaski zokuKhusela ngokuchasene ne-PM2.5,
I-White Colour Cup Cup Masks kunye ne-Pm2.5 ye-Industrial Dust Cup Mask yiKhuselo eliSihlanu loKhuseleko ngokuchasene ne-PM2.5 Uthuli, iPollen, iHlathi, uQeqsho, Umsi weSandla, Ubungqina boHaze, iHlathi, uQeqesho. Ubuso obukhuselweyo obukhuselweyo beNdebe abunakuvelisa ioksijini kwaye akufuneki busetyenziswe kwimeko enetyhefu.
Ukuvuselelwa kwabantwana okuKhuselweyo ngokuHamba ngeBhayisikile kuhambo lwangaphandle
I-Kids Face Mask ilahliwe kunye ne-Kids 3 Layer Face Mask zenziwe ngomgangatho ophezulu, i-3-layer-washable 100% ye-polyester yelaphu enelinen ethambileyo engalukwanga. Imaski nganye yenzelwe ibhulorho yempumlo ehlengahlengisayo eyenza ukuba ikulungele ukusetyenziswa kwemihla yonke.
Ukhuseleko loLuhlu lweeNgcali ezi-6 zoMbala ngombala weCarbon Gray
iimaski zokhuselo ezinokuphinda zisetyenziselwe ukusebenziseka, i-Breathable, uthuli oluchasayo, ucoceko kwaye kulula ukuyisebenzisa. Ubuso obukhuselayo bobuso obufihliweyo bokufakwa ngaphakathi kwikhabhoni kunokucoca iigesi eziyingozi okanye ivumba. I-KN95 ene-Valve 95% yokuhluza, indawo enee-degree ezingama-360 zokuphefumla, ukubonelela nokukhusela uthuli kuwe. Yenziwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu, zikhuselekile, zithambile kwaye zikhululekile, ukunciphisa ukucaphuka kolusu.
I-Hotodeal KN95 iMask yoKhuseleko iMask ephefumlayo ngeValve yokuphefumla
I-KN95 Vuvu 5ply kunye ne-kn95 iimaski zokuthintela ukubulala iintsholongwane zenziwe kwindawo engenalo uthuli kunye neworkshop ecocekileyo, kwaye yonke inkqubo ihlanganiswe ngoomatshini abazenzekelayo. Abasebenzi bezobugcisa nabo bayazithobela ngokungqongqo iimfuno. IMask Earloop eneValve lukhetho oluhle lokuyinxiba xa uhamba kwizikhululo zeenqwelo moya ezixineneyo, kwizikhululo zebhasi, kwiindawo ezinkulu, epatini nasezitratweni ezixakekileyo zedolophu. kukugcina eluthulini, PM 2.5, inkungu, umsi, umsi wemoto, njl. Ipakethe yeemaski ezingama-20 ezaneleyo ukuhlangabezana nosapho lwakho / abasebenzi / abahlobo bakho. ”
I-FFP3 Isiphefumli sobuso beMaski ngaphandle kweValve yokuPhuma kweMoya i-4 enamakhonkco entloko enelinen edibeneyo
Iimaski ze-ffp3 zokukhusela intsholongwane kunye ne-CE En 149 FFP3 yokukhanya kobuso obungenasiphelo senziwe ngelaphu elikumgangatho ophezulu welaphu lomqhaphu, imithungo icocekile kwaye iqinile, inikezela ngokugqwesa okugqwesileyo, ubume obuthambileyo, obutofotofo, obukhuselekileyo kulusu lobuso kunye nokuphefumla. ffp3 isigqumathelo sokuphefumla Umgangatho ophakamileyo wemigangatho emi-4 yecwecwe elenziwe ngumqhaphu olukiweyo unokuphefumla kakuhle nokuphefumla lula kwiindawo ezishushu / ezinomswakama Ilaphu elithambileyo lisetyenziselwa iintambo zeendlebe ezingonzakalisi iindlebe nokuba zinxitywe ixesha elide. Le ffp3 ikomityi yobuso bemask ene-vale iya kuwugcina ukhuselekile umlomo wakho ngokukhusela kulo lonke uthuli, indawo engcolileyo yomoya, umsi wezithuthi, kunye nomoya oyisanti. Luthuli olunxamnye nokutshintsha kwemozulu.
Idilesi: Ibhloko B, Jiaqiao Plaza, Hefei Anhui, China.